Ahoana no ahafahako mitondra fitohanana tranonkala mifandraika amin'ny fanombohana ahy?
Izany no fanontaniana mety, satria ny ankamaroan'ny tantaram-pahombiazana rehetra aty dia manomboka amin'ny olona mahatakatra ny fahombiazan'ny fitantanana ny Search Engine Optimization. Araka ny fantatry ny rehetra, SEO dia mety tsy ho faty na "maty" tahaka ny sasany mety hilaza soso-kevitra. Raha jerena ny filaharam-be sy ny fitadiavana vohikala fitadiavana votoatin'ny tranonkala, ny SEO dia tsy zava-dehibe - riscaldatori a infrarossi 4000w a prezzo bloccato. Ilaina ny hahazoana traikefa mivantana amin'ny tranokala ho an'ny tontolon'ny tetikasanao amin'ny aterineto, amin'ny ankapobeny amin'ny alàlan'ny dingana ambaratonga mivaingana sy sarotra indrindra amin'ny vanim-potoana fanombohana.
Ndeha ho raisintsika an-tsitrapo - Ny tanjona voalohany amin'ny fanombohana rehetra dia ny hampitombo ny fahitana ny aterineto amin'ny marika amin'ny SERP, ary ahazoana antoka fa ny adiresy ny mpihaino vondana na tsosialy. Ireo tarehimarika mangatsiaka sasantsasany - araka ny fanadihadiana faramparany, ny vokatra voalohany amin'ny pejy Google finday dia heverina ho manjaka, miaraka amin'ny 33% tahan'ny klioketsa rehetra azon'ireo vokatra ambony 10. Izany no mahatonga ny fampiasana ny SEO raha vantany vao nitondra ny vohikala vaovao anao dia mila mametraka rindran-tserasera mikarokaroka mivezivezy avy hatrany mitondrotra ny vohikala manontolo eo an-tampon'ny SERPs Google.
Noho izany, andeha hojerentsika ny fomba hitantanana ny tanjona amin'ny lafiny roa amin'ny sehatra SEO izay mikendry ny hampifanaraka ny fifamoivoizana an-tserasera amin'ny tranonkala - rafitra rohy mahomby,. Eto ambany eto dia hanana fijerena fohy ho azy ireo aho.
Ny iray amin'ireo singa fototra amin'ny tetik'ady SEO amin'ny tranonkala mifandraika amin'ny tranokala, ny fananganana rindrambaiko tsara asa dia tsotra. Hanome valiny ny rohy aterina ao amin'ny pejinao ny Google amin'ny alàlan'ny fanitarana ny fikarohana ao amin'ny tranonkalanao ao amin'ny SERP. Raha ny fahitako azy, manana fifandraisana misy kalitao bebe kokoa dia hanome anao fanatsarana ambony kokoa. Ny fijerena bebe kokoa sy manamarina ny tranonkala loharano dia ny lanjany bebe kokoa ny rohinao hampiakatra ny tranokalanao.
Anisan'ireo vahaolana haingam-pifamoivoizana malaza, vao haingana aho no naheno fa nahazo rohy maromaro tamin'ny bolongana vahiny. Midika izany fa manoratra lahatsoratra vahiny momba ireo tranonkala manan-danja mifandraika amin'ny lohahevitrao (na tsena nasionaly) ho takalon'ny fametrahana rohy mahazatra mankany amin'ny pejy Internet anao. Asa tsotra, eh? Ny toerana malaza indrindra amin'ny fifidianana anao dia ny fitaterana tranonkala avo lenta kokoa no hitondrana anao.
Ny fanamafisana ny tranokalan'ny tranokala
Voalohany indrindra, ny rafitra mendrika tsara indrindra ho an'ny tranonkala mifandraika amin'ny serasera dia midika fa manana tranonkala maromaro, mora ho an'ny fiaramanidina, noho ny rohy maro mifandray pejy samihafa ao amin'ny tranonkalanao. Amin'ny lafiny iray - mety ho tsara kokoa amin'ny traikefa an-tsarimihetsika tsara kokoa sy mora kokoa, satria ny mpitsidika dia handray soa avy amin'ny lalana mora sy malama izay mitarika any amin'ny pejy web misy anao.
Etsy andaniny anefa, ny fananganana rafitra mendrika tsara dia midika fa ny tranokalanao dia mora vakiana mora foana ary "takatra" avy amin'ny fitadiavana crawlers. Amin'izany fomba izany, dia hanana safidy ambony kokoa ianao hanehoana akaiky ny SERP top 10, ka manome ny safidy tsaranao kokoa mba hampitombo ny fifamoivoizana an-tserasera amin'ny aterineto hatrany am-piandohan'ilay fotoana sarotra sy mafy toy izany eo am-piandohana.